Promotion Package Plans – Agent Ngapali
Home>Blog>Links>Promotion Package Plans
Category: Promotion Package Plans
Ngapali trips 3-days,2 Nights…..Big promotion Plan!
Ngapali trips 3-days,2Nights…..Big promotion Plan! ကိုယ်​ချစ်​ရတဲ့သူ​တွေ နဲ့ ငပလီကမ်း​ခြေကို အပန်း​ဖြေခရီးသွားရင်​အခန်းမရမှာ ​အခန်းခ ​ဈေးကြီးမှာ စိတ်​ပူ​နေကြတဲ့သူ​တွေအတွက်​မနက်​စာ ​နေ့လည်​စာ ညစာ အပါဝင်​ တစ်​​ယောက်​ကို65,000MMK နဲ့ ငပလီရဲ့အထင်​ကရNew Lodge နဲ့ မိတ်​​ဆွေများကိုမိတ်​ဆက်​​ပေးပါရ​စေ….✌✌✌အနည်းဆုံး ၂ ​ယောက်​ထဲရှိတာနဲ့ သွားလို့ရပြီ​နော်​..​အရမ်းတန်​လွန်းတဲ့​ဈေးနှုန်းဖြစ်​တဲ့အတွက်​ဘယ်​မှာ မှမရနိုင်​တဲ့​ဈေးနှုန်း ကို (၅ လပိုင် ၂၀၁၈ မှ ၁၀ လ ပိုင် ၂၀၁၈) အထူး promotion နဲ့ ​ပေးထားတာပါ…အရမ်းတန်​လွန်းလို့ စိတ်​ချရ​အောင်​ booking အမြန်​တင်​ထား​နော် 🌟🌟🌟Package မှာဘာ​တွေဘာမလဲ?☕☕☕Breakfast🍜🍜🍜Lunch🍲🍲🍲Dinner​🏤🏤🏤​​ရေပူ​ရေ​အေး တီဗီ အဲကွန်း …
Links, Promotion Package Plans, Uncategorized April 29, 2018 August 20, 2018
*** ၁ ည (သို့)၂ ညအိပ် ငပလီခရီးစဉ်*** အပန်းဖြေအနားယူချင်သူများ၊ ခရီးသွားရတာကိုနှစ်ခြိုက်သူများနှင့် ပင်လယ်ပြင်မှာ အပျော်တမ်း ခရီးစဉ် ထွတ်လိုသူများ တွက် ပင်လယ်ပြင်မှာ ငါးမျှားမယ၊် ရေကူးမယ် ၊ ရေငုပ်မယ်၊ အလှဆုံးသော ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြမယ် ခရီးစဉ်ကတော့ ကားနဲ့ “သံတွဲ ဈေးမှ” လက်ဆောင်ပစ္စည်းများဝယ် ကြမယ် မြက်စွာဘုရား ဗျာဒိတ်ပေးထားသော မြက်စွာဘုရား ရဲ့ ဓါတ်တော်မွေးတော်များ ဌာပနာထားသော “တန်ခိုးကြီး ဘုရားသုံးဆူ” နဲ့ ပျံလွန်တော်မူပီ ၃၂ ရှိသော “ရဟန္တာ ကိုယ်တော်ကြီးများအာ ဖူးမြော်နိုင်ခွင့်” ကိုလဲ အထူးစီစဉ်ထားပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့အကြိုက် Package …
Thet PineLeaveaComment on Promotion Package Plans+ Hotel
Links, Promotion Package Plans, Uncategorized March 9, 2018 June 17, 2019
Agent Ngapali ( Hotel Ngapali Group)
Our Travel Agent Ngapali located nearest Pearl Island and Jate Taw (Gyeik Taw) Fisherman Villages and Lonthar Fisherman Village are One and half kilometer from our lodge .Than The large hilltop stands Buddha at the far end of the bay to the south of Ngapali. …
Activities, Links, Promotion Package Plans, Uncategorized February 16, 2018 June 17, 2019
All Activities Links
Our Travel Agent Ngapali located nearest Pearl Island and Jate Taw (Gyeik Taw) Fisherman Villages and Lonthar Fisherman Village are One and half kilometer from us .Than the large hilltop stands Buddha at the far end of the bay to the south of Ngapali. And …